Anti Rohingya - Anti Terrorist: ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ အရေးဆိုသည်မှာ.....
By James Mmt on Thursday, May 10, 2012 at 5:33pm ·
ဒီ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ အရေးကို လူအများစုက ဘာမှန်း သေခြာမသိကြဘူး…. လူတစ်ချို့က လူသားခြင်း စာနာမှုနဲ့ ရောချကြတယ်၊ လူတစ်ချို့က လူ့အခွင့်အရေး၊ လူတစ်ချို့က သူ့ဟာသူနေတာပဲ ထားလိုက်ပါလို့ ပြောကြတယ်…… ကဲ ဒါဖြင့် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ အရေးဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လောက်အထိ ဘာတွေ ဖြစ်သွားနိုင်လဲ၊ လူသားခြင်း စာနာထောက်ထားရမယ့် အရာလား၊ လူ့အခွင့်အရေးနဲ့ ဆိုင်သလား စသည်ဖြင့် ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်ပါမယ်…..
ထူးခြားသည့် သမိုင်း၊ မြင့်မားသည့် ယဉ်ကျေးမှုနှင့် နေထိုင်လာသည့် ရခိုင်လူမျိုးများ ပြယုဂ်
ကျွန်တော် ပထမ ရေးထားတဲ့ စာကို ဖတ်ပီးသူတိုင်း ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ ဆိုတာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရှေးယခင်ကပင် တည်ရှိနေတဲ့ တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ဘူး ဆိုတာ နားလည် သဘောပေါက် လက်ခံမှာပါ….. ဒီလောက် ကမ္ဘာမှာ စည်းနဲ့ စနစ်နဲ့ အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့ အင်္ဂလိပ်တွေရဲ့ မှတ်တမ်း မှတ်ရာတွေမှာ ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ တစ်လုံး တစ်ပါဒမျှ မတွေ့ရပဲ လွတ်လပ်ရေးနှောင်းပိုင်းမှ မူဂျာဟစ်တွေ တောင်းဆိုမှုနဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေ ထောင်းလမောင်းထလာတာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ရိုဟင်ဂျာဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသား မဟုတ်မှန်း သိကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်….
ဒီနေရာမှာ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ Origin မူဂျာဟစ်တွေကို လေ့လာကြည့်ပါ....... အင်္ဂလိပ်တွေ စစ်ပြေးတော့ သူတို့ အိန္ဒိယက (အဲ့ဒိတုန်းက အိန္ဒိယ၊ ပါကစ္စတန်၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် မကွဲပြားသေးပါဘူး... တစ်ပေါင်း တစ်စည်းတည်းကို အိန္ဒိယလို့ ခေါ်ပါတယ်...) ခေါ်လာတဲ့ စစ်ဗာရီတွေကို လက်နက် တပ်ဆင်ပေးခဲ့တော့ နဂိုကတည်းက မြန်မာပြည်ကနေ ခွဲထွက်ချင်တဲ့ မူဂျာဟစ် ခေါ်တောတွေဟာ ရခိုင်ရွာတွေ၊ မြို့တွေကို ဓါးပြတိုက်၊ ရွာလုံးကျွတ် မီးရှို့၊ လူမျိုးတုန်း အစုလိုက် အပြုံလိုက် သတ်ဖြတ်၊ ရခိုင် အမျိုးသမီးတွေကို မုဒိမ်းကျင့်ပီး သတ်ဖြတ်ခြင်း အစရှိတဲ့ လူမဆန်တဲ့ ရက်စက် ယုတ်မာမှုတွေကို ကျူးလွန်ခဲ့ကြပါတယ်....
၁၉၄၅ အင်္ဂလိပ်တွေ မြန်မာနိုင်ငံကို ပြန်ဝင်လာတဲ့ အခါကြတော့လည်း အဲ့ဒိ မူဂျာဟစ် ခေါ်တောတွေဟာ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတော ဒေသတွေကို ကြိုဝင်လာကြတယ်.... အတွင်းအထိလည်း ၀င်နိုင်သမျှ ၀င်လာခဲ့ကြတယ်..... အိန္ဒိယကနေ ပါကစ္စတန် ခွဲထွက်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ အချိန်မှာ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတောကို ပါကစ္စတန်ထဲ ပေါင်းထည့်ဖို့ ပါကစ္စတန် ခေါင်းဆောင် အလီဂျင်းနားကို တောင်းဆိုခဲ့တာမှာ အလီဂျင်းနားဟာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ကြည်ညိုတဲ့အတွက် လက်မခံဘူးဆိုတဲ့ ကတိကြောင့်သာ မြန်မာနဲ့ ပါကစ္စတန် နယ်နိမိတ် အရေး စစ်မခင်းခဲ့ရတာပါ.....
ပါကစ္စတန်ကနေ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရယ်လို့ ခွဲထွက်ပီးတဲ့ အခါမှာတော့ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်းတောကို အာသာငန်းငန်းနဲ့ လိုချင်ဇော ပြင်းပြလာတဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှတွေဟာ မူဂျာဟစ်တွေကို လက်နက်ထောက်ပံ့ပေးပီး တကျော့ပြန် သောင်းကျန်းမှုကို အစပြုစေခဲ့ပါတယ်……. မြန်မာကမ်းရိုးတန်း ဒီလောက် ရှည်လျားတာမယ် ဘူးသီးတောင် မောင်းတောမှာသာ ဒီလူမျိုးရေး ပြဿနာ ဖြစ်နေ တာကို သတိထားမိရင် ဒီကိစ္စတွေရဲ့ နောက်ကွယ်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရဲ့ ပါတ်သက်မှုတွေကို အထင်အရှားတွေ့နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်……
လူမျိုးတစ်မျိုးမှာ စာပေ ဘာသာစကား၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ သမိုင်း ဆိုတာ အတိအကျကို ရှိပါတယ်…. အခုလက်ရှိ ရိုဟင်ဂျာတွေ သုံးနှုန်းသော ဘာသာစကား၊ စာပေ အတိအကျ ခိုင်ခိုင်မာမာ မရှိပါဘူး…. အာရပ်တွေ သင်္ဘောပျက်လို့ ရောက်လာလျင် အာရပ်စကားသာ သုံးနှုန်းရမှာ ဖြစ်ပါတယ်…. သိုရာတွင် ယခု ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေ သုံးနှုန်းနေသည်မှာ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှရှိ ဘင်္ဂါလီတို့ သုံးနှုန်းတဲ့ ဘာသာစကားသာ ဖြစ်ပါတယ်….. ယဉ်ကျေးမှု အနေနဲ့လည်း မယ်မယ် ရရ ပြစရာ မရှိသလို၊ သမိုင်း ဆိုသည်မှာလည်း လိမ်လည်ရေးသား နေကြသဖြင့် တစ်ယောက် တစ်ပေါက်နှင့် အမြှီးအမေါက် မတည့်တာကို ကြည့်ခြင်း အားဖြင့် ရိုဟင်ဂျာဆိသည့် လူမျိုးသည် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှမှ လာသော ဘင်္ဂါလီ လူမျိုးများသာ ဖြစ်တယ်ဆိုတာ ငြင်းလို့ မရပါဘူး….
ဒါဆိုရင် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာအရေးဟာ လူသားခြင်း စာနာထောက်ထား သင့်တယ်လို့ပြောလာတယ်…. သူတို့ကော လူမဟုတ်ဘူးလားလို့ ပြောလာကြတယ်….. အခုလည်း လူသားခြင်း စာနာထောက်ထား တဲ့အပြင် ဘူးသီးတောင် မောင်းတော ဒေသဟာ မြန်မာပြည်မှာ INGO တွေ ဒုတိယ အများဆုံး ရုံးစိုက်ရာ ဒေသလို့တောင် သတ်မှတ်လို့ ရလောက်အောင် နိုင်ငံတကာက အကူအညီပေးရေး အဖွဲ့တွေ ရုံးစိုက် လုပ်ကိုင်နေတာ အထင်အရှားပါ….. ဒီနေရာမှာ ဘာလို့ သူတို့ကို ပန်းရောင် မှတ်ပုံတင် ပေးမကိုင်သလဲ….. ရှင်းနေပါတယ်… ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှက ဆင်းသက်လာတဲ့ မူဂျာဟစ်က အသွင်ပြောင်း ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ တိုင်းရင်းသား မဟုတ်တဲ့အတွက် သူတို့ကို နိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင် မပေးနိုင်ပါဘူး…..
နိုင်ငံသား မှတ်ပုံတင်ဆိုတာ နိုင်ငံတိုင်းမှာ တိုင်းတပါးသား လူမျိုးခြားတွေကို အလွယ်တကူ ထုတ်ပေးရိုးလည်း ထုံးစံ မရှိပါဘူး…. လူ့အခွင့်အရေးကို အင်မတန်လေးစားပါတယ် ဆိုတဲ့ အမေရိကန် နိုင်ငံမှာတောင် Green Card ပေါက်တိုင်း Citizen တန်းဖြစ်တာ မဟုတ်ပါဘူး….. ဒါကို မေ့ထားလို့ မရပါဘူး…. ဒီနေရာမှာ နိုင်ငံသား လျှောက်ထားချိန်မှာ မိမိလျှောက်ထားတဲ့ နိုင်ငံအပေါ်ကို သစ္စာစောင့်သိရမှာ ဖြစ်ပါတယ်….. အဲ့ဒိအတွက် သမိုင်းကြောင်းတွေအရ မြန်မာနိုင်ငံကို လွတ်လပ်ရေး မရခင်ကတည်းက ခွဲပီး ဖဲ့ထုတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တဲ့ မူဂျာဟစ်တွေရဲ့ မျိုးဆက်၊ အခုလက်ရှိလည်း တိုင်းပြည်အပေါ်မှာ သစ္စာစောင့်သိခြင်း အလျဉ်းမရှိ၊ ဘင်္ဂလားနဲ့ မြန်မာ ရေပိုင်နက် ကိစ္စမှာ ဘင်္ဂလားကို Gratifying လှမ်းလုပ်တဲ့ လူမျိုးတွေကို ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအနေနဲ့ လွယ်ကူစွာ နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့် ပေးဖို့ရန် မဖြစ်နိုင်ပါဘူး…..
အခုလက်ရှိကို ဘူးသီးတောင် မောင်းတော ဟာ Buffer Zone အနေနဲ့ ဖြစ်နေပီး ဘင်္ဂလားနဲ့ စစ်ဖြစ်ခဲ့သော် အဆိုပါ ဒေသတွင် နေထိုင်တဲ့ ရခိုင်လူမျိုးတွေအတွက် အလွန်ပင် အန္တရာယ် ကြီးပါတယ်…. ဘူးသီးတောင် မောင်းတောဒေသမှာ ရှိတဲ့ ရွာအများစုဟာ ဘင်္ဂါလီ ရွာတွေ ဖြစ်နေတာကိုလည်း တိုင်းပြည် လုံခြုံရေးအတွက် သတိထားသင့်ပါတယ်…… ဒိအတွက် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာအရေးဟာ လူသားခြင်း စာနာထောက်ထားလို့ မရတဲ့၊ အလေးအနက်ကို သတိထားရမယ့် တိုင်းတစ်ပါး ကျူးကျော်မှု ဖြစ်ပါတယ်……..
ဒါဖြင့် တိုင်းတပါးသား ရိုဟင်ဂျာတွေကို လွတ်လပ်စွာ ပြည်တွင်း သွားလာခွင့် ပေးသင့်တယ် ဆိုလာပြန်ပါတယ်….. ဘယ်နိုင်ငံမှ မိမိနိုင်ငံအတွင်းကို တိုင်းတပါးသားများ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားလာခွင့်ကို မပေးပါဘူး…. အထူးသဖြင့် ဆင်းရဲတွင်း နိမ့်ကျတဲ့ နိုင်ငံမှ နိုင်ငံသားများကို ပိုလို့ပင် တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ကိုင်တွယ်ပါတယ်…. ဥပမာ အနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံသားများ ပြည်ဝင်ခွင့်လျှောက်လျင် အလွယ်တကူ ချပေးသော နိုင်ငံဟာ မရှိသလောက် ရှားပါတယ်…… စင်္ကာပူရှိ သြစတေးလျ သံရုံးဆိုလျင် မြန်မာနိုင်ငံသား ဗီဇာ လျှောက်ထားသူများအား သံရုံးအတွင်း ၀င်ခွင့်ပင် မပေးပါဘူး…. ဒါဆိုရင်ဖြင့် လွတ်လပ်စွာ သွားလာခွင့်ဟာ နိုင်ငံတိုင်းမှာ သူ့အကန့်အသတ်နဲ့ သူ ရှိတယ်ဆိုတာ သဘောပေါက်ကျမှာ ဖြစ်ပါတယ်….
ဒါဖြင့် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ အရေးဟာ မွတ်စလင်နဲ့ ဘာသာရေး ပဠိပက္ခ ဖြစ်စေချင်လို့ ပြောဆိုလာကြတယ်လို့ စွတ်စွဲလာပြန်ပါတယ်….. အပေါ်မှာ ပြောထားတာ ရှင်းပါတယ်…. ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ အရေးဟာ တိုင်းတစ်ပါး ကျူးကျော်မှု ဖြစ်ပါတယ်…. မွတ်စလင်ကြောင့်ရယ် မဟုတ်ပါဘူး….. မြန်မာပြည် အရှေ့ဘက်က တရုတ်တွေ၊ ယိုးဒယားတွေ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ပင် ဖြစ်သော်လည်း ကျူးကျော်ဝင်ရောက် နေထိုင်လာလျင် ကန့်ကွက်နေတာ အထင်အရှား ဖြစ်ပါတယ်….. ကန့်လည်း ကန့်ကွက်နေကြပါတယ်…. သို့ဖြစ်သောကြောင့် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ အရေးဟာ ဘာသာရေး ပဠိပက္ခအတွက် ဇောင်းပေးလာခြင်း မဟုတ်ပါဘူး…..
အများမသိသေးတဲ့ အချက်အနေနဲ့ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ ရှီးယိုက် မွတ်စလင် ဘာသာဝင်တွေ ဖြစ်ပြီး ပြည်တွင်းမှာ ရှေးဘုရင်တွေ လက်ထက်ကပင် အေးအတူ ပူအမျှ နေထိုင်ကြတဲ့ မွတ်စလင်တွေဟာ ဆွန်နီ မွတ်စလင်တွေ ဖြစ်ကြတယ် ဆိုတာပါပဲ….. ဘာသာ တူသော်လည်း ဂိုဏ်းကွဲခြင်း၊ ဂိုဏ်းတူသော်လည်း ပင်ကိုယ် ယုတ်မာသည့် စိတ်ဓါတ် အခံရှိခြင်းတို့ကြောင့် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတို့ ရောက်သည့် နိုင်ငံတိုင်း တွင် ပြဿနာပေါင်း စုံ ဖြစ်သည်မှာ ပုံမှန်လို ဖြစ်နေပါတယ်…. အထူးသဖြင့် ဘာသာတူ မလေးရှားလို နိုင်ငံမှာပင် မလေးနိုင်ငံသူတွေကို ယူထားပြီး ကလေးနဲ့ တိုးလို့ တွဲလောင်း ပစ်ထားတဲ့ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေရဲ့ လုပ်ရပ်တွေကို ကြည့်ရင် သိနိုင်ပါတယ်….
သို့ဖြစ်သည့်အတွက် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေ ပြည်တွင်းမှာ များပြားလာရင် ဘာဖြစ်မလဲ မေးစရာ ရှိပါတယ်…. ပထမဆုံးအနေနဲ့ ပြည်တွင်း မွတ်စလင်တွေ ၀ါးမြိုခံရမှာ ဖြစ်ပါတယ်…. ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေ အားကောင်းလာလျင်၊ အာဏာလက်ကိုင်ရှိလာလျင် ပြည်တွင်း ဆွန်နီ မွတ်စလင်တွေကို ဘာသာရေး သစ္စာဖောက်မှုကို အကြောင်းပြုပြီး သုတ်သင်လာနိုင်ပါတယ်…. ဒါဟာ အင်မတန် ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ ဘာသာရေး ခုတုံးလုပ်တဲ့ အစုလိုက် အပြုံလိုက် လူသတ်မှုတွေ ဖြစ်လာမယ့် အရေးအခင်းလည်း ဖြစ်ပါတယ်….. ကမ္ဘာ့သမိုင်းမှာလည်း ထိုကဲ့သို့သော ကိစ္စတွေ ဖြစ်ခဲ့သလို၊ မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း အင်မတန် အကြမ်းဖက်မှုနဲ့ သဟဇာတ ဖြစ်နေတဲ့ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေ အားကောင်းလာလျင် ဖြစ်လာနိုင်ဖွယ်တွေ ရှိနေပါတယ်…..
လူသားခြင်း စာနာထောက်ထားမှု၊ လူ့အခွင့်အရေး ဆိုတဲ့ စကားလုံးနဲ့ ကာကွယ်လာပြန်ပါတယ်….. ကျွန်တော် ခပ်ရှင်းရှင်းပဲ မေးပါမယ် မြန်မာပြည်မှာ ပင်ကိုယ်နေထိုင်ကြတဲ့ ကချင်၊ ကယား၊ ကရင်၊ ချင်း၊ မွန်၊ ဗမာ၊ ရခိုင်၊ ရှမ်း စတဲ့ တိုင်းရင်းသား လူမျိုးကြီးတွေ အပါအ၀င် ကျန်တဲ့ လူမျိုးစုငယ်တွေ လူ့အခွင့်အရေး၊ နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး၊ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်၏ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ခွင့် အပြည့်အ၀ ရပီလား မေးကြည့်ချင်ပါတယ်…. နိုင်ငံအသီးသီးဟ ရာဇ၀င်တွင် မိမိနိုင်ငံသား၏ အခွင့်အရေးအား ပစ်ပယ်၍ တိုင်းတစ်ပါး လူမျိုးခြား အစုလိုက်အပြုံလိုက်အား အခွင့်အရေးပေးခြင်းမှာ မည်သည့်နိုင်ငံတွင်မျှ မရှိပေ…. ဆင်းရဲသော မြန်မာနိုင်ငံ၊ ယခုမှ ပြာပုံတွင်းက ရုန်းထရန် ကြိုးစားနေသော မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် မိမိနိုင်ငံသားတို့၏ အကျိုးကျေးဇူးကိုသာ ဦးစားပေးရမည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံရေးကို ဖော်ဆောင်သူတိုင်း လက်ခံသည့် တရားပင် ဖြစ်ပါသည်။
ဤနေရာတွင် လူ့အခွင့်အရေးဆိုသည်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအားသာ ကွက်ကျားမိုးဖြင့် ဖိအားပေးနေသည်ကို တွေ့နိုင်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုသော် အာရပ်နိုင်ငံများတွင် အခြေချ နေထိုင်ကြသည့် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာများသည် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်နေထိုင်သော်လည်း၊ အဆိုပါနိုင်ငံတွင် မွေးဖွားစဉ်မှစ၍ နေထိုင်ခဲ့သော်လည်း နိုင်ငံသားတစ်ယောက်၏ အခွင့်အရေးကို ရရှိရန် နှစ်ပေါင်း ဆယ်စုနှစ် ၂ ခုစာမက စောင့်စားရသည်ကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် သိနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ စောင့်စားနေစဉ်အတွင်း အဆိုပါ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာများ၏ ရင်သွေးများအား အစိုးရကျောင်းများတွင် ကျောင်းတက်ခွင့် မပေးခြင်း၊ ကလေး မွေးဖွားနှုန်းအား ထိမ်းချုပ်ခြင်း အစရှိသည်တို့ ပြဌာန်းထားခြင်းများ ရှိသော်လည်း လူ့အခွင့်အရေးဟု ကြွေးကျော်နေသူများမှာ မျက်စိကန်းနေသည့်အလား မတွေ့မမြင်ပဲ နှုတ်ပိတ်နေကြသည်ကို သိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
သို့ဖြစ်သည့်အတွင် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာများသည် ကျူးကျော် ၀င်ရောက်လာသူများ ဖြစ်ခြင်း၊ ခိုးဝင်ရောက်လာသူများ ဖြစ်ခြင်းကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် နိုင်ငံသား အခွင့်အရေး အပြည့်အ၀ မပေးနိုင်သည်မှာ တရားနည်းလမ်း မှန်ကန်သော ပြုကျင့်မှု ဖြစ်ပါသည်။ အဘယ့်ကြောင့်ဆိုတော့ ဘာသာတူသည့် အာရပ်နိုင်ငံများသည်ပင် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတို့အား လူသားမဆန်စွာ ပြုမူဆက်ဆံနေသည်ကို အထင်အရှား တွေ့နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်သည့်အတွက် မြေးကားအရင်း၊ သားကာ အဖျားဆိုသကဲ့သို့ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာများအား လူ့အခွင့်အရေး ပေးပြီး ပြည်တွင်းရှိ ဌာနေရင်း မြန်မာနိုင်ငံသားတို့မှာ ငတ်တလှည့်၊ ပြတ်တလှည့်ဖြင့် နေထိုင်သွားရမည်မှာ မည်သို့မျှ ဖြစ်နိုင်ခြင်း မရှိပါ။
ထို့ကြောင့် မည်သူတွေမှ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာအရေးအား ရှေ့တန်းတင်နေသလဲ၊ ကမ္ဘာသိအောင် အားထုတ်နေလဲ မေးစရာ ရှိလာပါတယ်…… အင်္ဂလန်နိုင်ငံတွင် အခြေစိုက်သည့် Burma Campaign (UK) နှင့် Exile Media များ ဖြစ်ပါတယ်… မြန်မာနိုင်ငံမှာ စစ်မှန်တဲ့ အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး လမ်းကြောင်းပေါ်ကို တစစ ဦးတည်ပြီး လျှောက်လှမ်းလာချိန်မှာ နိုင်ငံတကာ အကူအညီတွေဟာ မြန်မာနိုင်ငံထဲကို တိုက်ရိုက်စီးဝင်တော့မှာကို မြင်နေကြတဲ့အတွက် မိမိတို့ ထမင်းအိုးကွဲမှာကို ကြောက်လာကြတဲ့ ပြည်ပအခြေစိုက် မီဒီယာများနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ လုပ်စားနေကြ Burma Campaign (UK) တို့ဟာ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာနဲ့ စားကွက် ထွင်လာပါတယ်…..
ဘူးသီးတောင်နှင့် မောင်းတောရှိ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာများအား အကူညီပေးနေသည့် နိုင်ငံတကာ အဖွဲ့အစည်းများ
ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာတွေကို လက်ညှိုးထိုး ပြစားခြင်းဖြင့်၊ အနောက်နိုင်ငံများထံမှမက အာရပ်နိုင်ငံများထံမှပါ မြက်မြက်စွက်စွက် အသက်ဆက်ရန် ရံပုံငွေ ရရှိသည့်အတွက်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ တနည်းအားဖြင့် မျောက်ပြ ဆန်တောင်းခံရသည် ဆိုသော် မမှားပါဘူး….. အဆိုပါ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အသံလွှင့်ဌာနများသည် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာများအား လူသားခြင်း စာနာထောက်ထားရန် အတန်တန် အော်ဟစ်နေကြသော်လည်း ၎င်းတို့အနေဖြင့် လက်တွေ့တွင်မူ တစ်ပြားတစ်ချပ်မျှ ဘူးသီးတောင် မောင်းတော ဒေသတွင် နေထိုင်သည့် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာများအား ပံ့ပိုးကူညီခြင်း၊ အလှူငွေ လှူဒါန်းခြင်း မရှိသည်ကို အဆိုပါ ဘူးသိးတောင် မောင်းတော ဒေသတွင် လက်ရှိ လုပ်ကိုင်နေသည့် INGO အဖွဲ့အစည်းများ၏ နှစ်စဉ် စာရင်းရှင်းတန်းများတွင် ကြည့်ရှုလေ့လာလျင် သိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်…..
ထို့အတူပင် အာရပ်နိုင်ငံမှ ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာအရေးနှင့် ပါတ်သက်သည့် အလှူရှင်များသည်လည်း အဆိုပါ INGO အဖွဲ့အစည်းများအား ငွေ လှူဒါန်းခြင်း အလျင်းမရှိသည်ကို လေ့လာသိရှိခြင်းအားဖြင့် ၎င်းတို့၏ ရည်မှန်းချက်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအား အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားများ ကြီးစိုးသည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံကဲ့သို့ နိုင်ငံမျိုး ဖြစ်စေရန် ဦးတည်နေသည်ကို သိရှိနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်….
အချုပ်အားဖြင့် ဆိုရလျင် ဘင်္ဂါလီ ရိုဟင်ဂျာ အရေးသည် လူမျိုးရေး ပဠိပက္ခ ဖြစ်စေရန်မဟုတ်ပဲ ပြည်ပမှ ပုံစံဖျက်ထားပြီး ၀င်ရောက်လာသည့် ကျူးကျော်မှု၊ တနည်းအားဖြင့် ဘူးသီးတောင် မောင်းတောအား ရခိုင်ပြည်နယ်မှ ခွဲထွက်ရန် ကြိုးပန်းလာသည့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်၏ ရန်မှ ကာကွယ်ခြင်းဖြစ်ပြီး အဆိုပါ ပြဿနာအား မကြာခဏ မီးမွှေးနေသည်မှာ မည်သူတွေ ဖြစ်ခြင်းနှင့် မည်သည့်အတွက်ကြောင့် ပြုလုပ်နေခြင်းအား ရှင်းလင်းစွာ သိရှိနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Anti Rohingya (Bengali Muslim) - Anti Terrorist
ဗိုလ်ကြီး ကိုကိုပိုင်ရဲ့ ဘင်္ဂါလီကုလားများအပေါ် ကိုယ်ပိုင်အမြင်
ကျေးဇူးပြု၍ နားဆင်ပါ ... ကျွန်တော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ တည်ငြိမ်သွားလိမ့်မယ်လို့ ထင်ထားတဲ့ ရခိုင်နဲ့ရိုဟင်ဂျာအရေးကို ခုတုံးလုပ်ပြီး နှစ်...
Copyright (c) 2010 Anti Rohingya - Anti Terrorist.
Designed by Blogspot Templates